Ngwa kacha mma n'efu maka gam akporo | Androidsis
Edere Ferreno | 18/11/2021 10:00 | Ngwa gam akporo
Na Play Store anyị nwere nnukwu nhọrọ nke ngwa dị maka gam akporo ekwentị. Enwere ngwa nke ọtụtụ ụdị dị iche iche, nke ga-enye anyị ọrụ dị iche iche. Ihe ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ bụ ngwa bara uru n'efu iji budata na mkpanaka gị ma ọ bụ mbadamba. Ngwa ndị bara uru, nke ga-enye anyị ọrụ na-enye anyị ohere iji ngwaọrụ Android anyị n'ụzọ kacha mma.
Mgbe ahụ anyị hapụrụ gị na a nhọrọ nke ngwa efu bara uru maka gam akporo, nke anyị nwere ike ibudata na Play Store. Ha bụ ngwa ndị anyị ga-enwe ike iji na ekwentị ma ọ bụ tablet anyị, ka anyị wee jiri ngwaọrụ ahụ nke ọma. Ebe ọ bụ na ngwa ndị a na-enye anyị ọrụ ọhụrụ ma ọ bụ na-ahapụ anyị ka anyị nweta ihe kachasị na ngwaọrụ anyị n'ụzọ dị mfe.
1 Ntugharị Google
4 Faịlụ Google
6 Meenụ ọsọ ọsọ
Anyị na-amalite site na ngwa Google, nke obi abụọ adịghị ya na ọ kwesịrị ka ọ bụrụ ebe na ndepụta a nke ngwa efu bara uru maka gam akporo. Google Lens bụ ngwa nke anyị ga-eji tụọ igwefoto n'otu ihe dị n'ihu anyị na mgbe ahụ anyị ga-enwe usoro nhọrọ. N'ihi ngwa ahụ, ọ ga-ekwe omume ịchọpụta osisi ma ọ bụ anụmanụ, anyị nwere ike ịchọ ihe ndị yiri nke dị n'ihu anyị, anyị nwere ike ịtụgharị ederede anyị na-atụ na igwefoto ma ọ bụ Google ihe anyị na-ahụ n'oge ahụ. , inwe ozi ndị ọzọ.
Na mgbakwunye, ọ bụ ngwa na-ewebata ọrụ ọhụrụ ka oge na-aga, ka anyị nwee ọtụtụ nhọrọ dị na ya. Otu njirimara kachasị ọhụrụ na Google Lens bụ ohere iji dozie ihe omume ụlọ akwụkwọ gị na ya. Ị nwere ike ịrụtụ aka na nsogbu mgbakọ na mwepụ na ngwa ahụ, mgbe ahụ ị ga-enwe ike ịmata nsonaazụ nke mmega ahụ yana otu esi edozi ya. Ya mere, ọ bụ nnukwu enyemaka ma ọ bụrụ na anyị aghọtaghị otu mmega ahụ ma ọ bụ na anyị chọrọ ịlele ma nsonaazụ anyị nwetara ọ bụ eziokwu.
Ejighị Google Lens arụnye na ndabara na ekwentị gam akporo. Dịka ị na-ahụ, ọ bụ otu n'ime ngwa bara uru n'efu, dị na Play Store maka ekwentị Android na mbadamba. Ngwa enweghị ịzụrụ ma ọ bụ mgbasa ozi ụdị ọ bụla n'ime. Ị nwere ike ibudata ya na njikọ a:
CPU-Z bụ aha nwere ike ịdị ka ọtụtụ n'ime unu maara nke ọma, n'ezie, anyị agwala gị maka ya n'oge gara aga. N'okwu a, anyị na-eche ihu na ngwa nke inwe ike inyocha ọnọdụ ekwentị ma ọ bụ mbadamba Android anyị. Ngwa ahụ na-ahụ maka ịme nyocha nke akụkụ dị iche iche nke ngwaọrụ ahụ, dị ka batrị, igwe nrụpụta, ihuenyo ma ọ bụ sistemụ n'ozuzu ya. N'ihi nyocha a, anyị ga-amata ọnọdụ nke ngwaọrụ anyị, na mgbakwunye na inwe ike ịchọpụta ọdịda nwere ike ịbụ nke ọ bụla n'ime ihe ndị ahụ dị na ya.
N'agbanyeghị na ọ bụ ngwa dị naanị na Bekee, CPU-Z dị mfe iji. Ngwa nwere interface dị mfe na a na-eme nyocha ya na nnukwu ọsọ. A na-ekewa ngwa ahụ n'ime usoro taabụ, ka anyị wee hụ nke ọ bụla n'ime ihe ndị ahụ iche iche ma si otú a marakwuo ọkwa ha ma ọ bụ nweta data kpọmkwem gbasara ha n'oge ọ bụla. A na-egosi ya dị ka ngwá ọrụ dị mkpa maka ndị ọrụ chọrọ ịchịkwa ọnọdụ ekwentị ma ọ bụ mbadamba.
CPU-Z bụ otu n'ime ha ọzọ na-akpali free bara uru ngwa na anyị nwere ike ibudata na android. Enwere ụdị akwụ ụgwọ dị nke ngwa ahụ, nke na-enye anyị usoro ọrụ ndị ọzọ, mana nke bụ eziokwu bụ na ụdị n'efu ya na-emezu nke ọma na nke a. Ị nwere ike ibudata ya na njikọ a:
Cometin bụ ngwa nwere ike ọ gaghị ama nke ọtụtụ n'ime unu. Ngwa a ka na-eto n'etiti ndị ọrụ gam akporo, mana atọrọ ka ọ bụrụ ngwa na-ewu ewu nke ukwuu n'ọdịnihu. N'ime anyị nwere nnukwu ihe anyị nwere ọtụtụ ndụmọdụ, aghụghọ, ngwaọrụ na tweaks nke anyị nwere ike iji na ekwentị Android ma ọ bụ mbadamba. N'ihi ya, anyị ga-enwe ike iji ekwentị ma ọ bụ mbadamba ihe nke ọma mee ihe mgbe niile, ya mere ọ bụ ihe ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ.
E kewara ngwa a n'ime usoro modulu, nke ịrụ ụka adịghị ya na-eme ka ịkwaga n'ime ya bụrụ ihe dị mfe karị. Na nke ọ bụla n'ime modul ndị a anyị ga-enwe ndụmọdụ ma ọ bụ aghụghọ maka otu akụkụ ma ọ bụ mpaghara. Ya bụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ihe na-eji mobile mkpọchi ihuenyo mma, e nwere a modul nke e bu n'obi na ihuenyo na anyị nwere ike ịhụ na ya nhọrọ ndị dị. Nke a ga-enye gị ohere iji ekwentị ma ọ bụ mbadamba ihe gị n'ụzọ ka mma mgbe niile. Na mgbakwunye, a na-ewebata ndụmọdụ ma ọ bụ aghụghọ ọhụrụ ka oge na-aga.
Cometin nwere ike ịbụ ngwa ama ama ntakịrị maka ọtụtụ, mana ọ bụ otu n'ime ngwa bara uru kacha mma maka gam akporo nke anyị na-ahụ n'ahịa. Enwere ike ibudata ngwa a na Storelọ Ahịa Play na mobile ma ọ bụ mbadamba anyị. Ọ nwere ụdị akwụ ụgwọ, mana ụdị ya efu na-arụ ọrụ nke ọma.
Ihe nchọgharị faịlụ bụ ngwa a ga-enwerịrị na ekwentị gam akporo. Na Play Store anyị nwere ọtụtụ nhọrọ dị n'efu, ma n'enweghị obi abụọ ọ bụla na ọ bụ Google ngwa pụtara na nke a ubi. Faịlụ Google bụ onye na-enyocha faịlụ nwere otu n'ime ngwa nhicha kacha mma anyị nwere ike iji. Sistemụ nchọpụta faịlụ oyiri gị Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ọ ga-enye anyị ohere n'ụzọ dị mfe iji kpochapụ faịlụ oyiri na mkpanaka. Na mgbakwunye na ihichapụ faịlụ ndị ahụ anyị achọghị na nke na-ewe naanị ohere na ngwaọrụ ahụ.
Akụkụ ọzọ dị mkpa bụ na Google Files nwere interface dị mfe iji, nke na-enye ohere ka onye ọrụ Android ọ bụla nwee ya na ekwentị ha. Ọ bụ ụzọ dị mma iji chịkwaa faịlụ ndị dị na ngwaọrụ ahụ, yana inwe ike imecha faịlụ ndị ahụ oyiri dị na ya n'oge ọ bụla wee hapụ ohere na mkpanaka. Mgbe imepere ngwa ahụ, ọ ga-agwa gị ma enwere ike ịtọhapụ oghere n'oge ahụ ma ọ bụ na ọ bụghị.
Dị ka ngwa ndị ọzọ dị na ndepụta a, Google Files bụ ngwa anyị nwere ike budata n'efu na mkpanaka anyị ma ọ bụ gam akporo mbadamba. Ọ bụghị ngwa arụnyere na ekwentị mkpanaaka gị, yabụ ị ga-aga Play Store iji budata ya. Ngwa a dị site na njikọ ndị a:
A paswọọdụ njikwa bụ ihe ọzọ dị mkpa ngwá ọrụ n'ihi na ọtụtụ gam akporo ọrụ. Nhọrọ dị na Storelọ Ahịa Play sara mbara, mana nhọrọ dị ka BitWarden pụtara na nke a. Otu igodo mere ngwa a ji dị na ndepụta a bụ na ọ dị otu n'ime ole na ole njikwa okwuntughe na-emeghe isi mmalite. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na nke a bụ ihe na-enye anyị ohere ịmara na ọ dị mma na ntụkwasị obi, yabụ na anyị agaghị enwe nsogbu iji ya na mkpanaka anyị.
Ngwa a ga-enye anyị ohere chekwaa ma okwuntughe na nọmba kaadị, ndetu echedoro, dị ka data nkeonwe. A na-edobe ozi ahụ n'ime oghere ezoro ezo site na iji AES 256-bit encryption, yana semlla na PBKDF2 SHA-256. Ya mere, anyị agaghị atụ egwu ya, ebe ọ bụ na a na-echebe ozi a nke ọma na njikwa a maka gam akporo.
BitWarden bụ ngwa ọzọ bara uru nke anyị nwere ike budata ugbu a na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ mbadamba Android anyị. Na mgbakwunye, n'ime enweghị ịzụrụ ma ọ bụ mgbasa ozi nke ụdị ọ bụla, yabụ enweghị nsogbu ma ọ bụ ịgbalị iji ụdị akwụ ụgwọ nke anyị achọghị.
Bitwarden Paswọdu njikwa
Developer: Ụlọ ọrụ Bitwarden Inc.
Meenụ ọsọ ọsọ
Ngwa ngwa bụ ngwa na-enye mmetụ dị iche na ngwa nchetara maka gam akporo. Azịza nye ajụjụ ndị dị ka Kedu mgbe bụ ụbọchị ọmụmụ enyi? o Kedu mgbe usoro ihe omume ahụ ịchọrọ ịhụ mmalite? ha ga-abụ usoro kaadị na anyị ga-ahụ dị ka wijetị na mobile. Na kaadị ndị a, ị ga-enwe ike ịhụ ọnụ ọgụgụ, ka anyị mara ogologo oge ruo mgbe ụbọchị ahụ ga-abịa mgbe ihe ga-eme.
Kaadị ndị a bụ ihe mara ezigbo mma na-adọrọ adọrọ., nke ga-eme ka anyị na-ahụ ha mgbe niile n'ụzọ dị mfe. Nhazi ngwa ngwa dị mfe yana ngwa ahụ dị mfe iji, yabụ anyị nwere ike ịnwe ncheta ndị ahụ mgbe niile. N’ihi ya, ihe na-emenụ agaghị atụ anyị anya. Na mgbakwunye, enwere ike ịkekọrịta kaadị ndị a na ndị enyi n'oge ọ bụla, ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe omume anyị na ndị ọzọ zubere.
Ngwa ngwa bụ free ibudata site na Ụlọ Ahịa Play na gam akporo. Ngwa ahụ nwere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime, iji nweta ụdịdị adịchaghị ya. Ya free version bụ karịa ezuru anyị.
Ngwa ngwa: Ngụkọta ihe ndị dị mkpa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa bara uru kacha mma maka gam akporo
Otu esi eme nyocha na WhatsApp